Nin nadiifiye & xamaali ahaa madaxweyne noqdey (Calaf lama dagoo lama diidi karo) – SBC
Nin nadiifiye & xamaali ahaa madaxweyne noqdey (Calaf lama dagoo lama diidi karo)
Hogaamiyihii mucaaradka wadanka Zambia Michael Sata ayaa si rasmi ah loogu caleemo saarey loona dhaarshey madaxweynaha wadankaasi ka dib markii uu ku guuleystey badi codadkii laga dhiibtey doorashooyinkii dhacay,
Michael Sata ayaa doorashada kaga guuleystey madaxweynihii xafiiska madaxtinimada hayey Rupiah Banda kaasi oo wadankaasi xukumayey 2008-2011, waxaana ku guuleysashada doorashadiisa uu ahaa tartankii afaraad ee uu isu soo sharaxo xilka madaxwenaha.
Mr Sata, wuxuu helay 43% codadkii laga dhiibtey doorashada, waxaana si xarago leh ugu hambalyeeyey ninka uu kaga guuleystey doorashada.
“Dad reer Zambia way hadleen, waana in aynu dhamaanteen maqalnaa” ayuu yiri Mr Banda oo saxaafada la hadleyey xiligii uu hadalkan jeedinayeyna ilmo ayaa indhahiisa ka soo burqanaysay.
Michael Sata ayaa hogaaminayey xisbigiisa Patriotic Front (PF) waxaana ku guuleysashadiisa doorashada ay soo afjartey 20 sano oo xisbiga Movement for Multiparty Democracy (MMD) uu xukumayey wadanka Zambia.
Intii ay socotey xaflada dhaarinta Mr Sata ee uu hadalka jeedinayey madaxweynaha xafiiska baneynaya Mr Banda waxaa si weyn ugu qayliyey oo ku oriyey taageerayaasha Mr Sara.
Mr Sata wuxuu muujiyey in uu ka dhabeyn doono balanqaadyadii doorashooyinka uu ku soo galey wuxuu ku ceiyey in uu eryi doono shirkadaha shisheeye ee ku sugan dalkaasi, isla markaana uu wax weyn ka qaban doono arimaha musuqmaasuqa dalkiisa la degay.
“Si dhab ah waxaan u dareemayaa deganaansho, isla markaana waxaa dhamaaday xanuunkii aan ka cabsi qabey, Mr Santa waa saaxiibkey weyn, doorashaduna waxay u dhacdey hanaan dimuqraadiyadeed & ilbaxnimo xambaarsan” ayuu yiri Mr Banda oo sheegay inaanu noqon doonin qofkii ugu horeeyey ee araxda ka jabiya hanaanka dimuqraadiyadeed ee Zambia.
Waa kuma Michael Sat?
Michael Sata oo loo yaqaan ‘King Cobra’ wuxuu dhashay 1937-dii wuxuu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee dalka Zambia soo mara, waa nin haysta diinta Kirishtaanka gaar ahaan madhabta Catholic-ga waana xaasle 8 caruur ah dhaley, xaaskiisuna tahay dhakhtarad.
Michael Sat sanadihii 50-meeyadii ayuu tagey wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London halkaasi oo uu ka soo qabtey shaqooyin hoose oo ay ka mid tahay nadiifinta & xamaaliga mid ka mid ah saldhigyada tareenada London gaar ahaan Victoria Station.
Laakiin intii uu ku sugnaa magaalada London ayuu Mr Sata wuxuu bilaabay waxbarasho waqti dhiman isagoo markii uu waxbarashadiisii dhameystna dalkiisa dib ugu laabtey.
Sanadihii sagaashameeyadii ayuu bilaabay hawlaha siyaasada waxaana uu ka baxay xisbigii Movement for multiparty Democracy MMD xisbigaasi oo uu hogaaminayey Frederick Chiluba oo sanadkii 1991-kii doorashooyinkii dhacay kaga guuleystey madaxweynihii ugu horeeyey ee Zambia Keneth Kaunda oo hogaaminayey xisbigii UNIP.
Mr Sata xukuumadii Chiluba wuxuu ka soo qabtey jagooyin kala duwan oo wasiir sida wasiirka wasaarada caafimaadka & wasiirka wasaarada shaqada & arimaha bulshada, laakiin sanadkii 2001-dii ayuu ka baxay xisbigii MMD wuxuuna sameystey xisbiga PF ee maanta uu uga guuleystey madaxweyne Banda oo isaga horey doorashadii 2008-dii ku reebay doorashooyinkii dhacay sanadkaasi.
Michael Sata wuxuu la soo baxay siyaasad cusub oo ah in uu albaabada ka xirto siyaasada dalka Shiinaha ee ku wajahan dalkiisa isagoo sheegay in uu eryi doono shirkadaha Shiinaha ee dhanka soo saarista macdanta.
Waxaa kale oo uu balanqaaday in uu dalka saari doono ajaanibta ganacsatada ah ee u dhashay Hindiya, Lubnaan & Shiinaha oo uu ku tilmaamay inay dhiigmarid yihiin oo ay jaqayaan dhiiga dadkiisa.
Shiinaha waxaa lagu eedeeyaa inay ka faa’ideystaan macdanta Zambiya iyagoo aan shaqaaleyn dadka dalkaasi u dhashay isla markaana aanay adeegsan shirkadaha Shiinuhu waxyaabaha ka soo baxa gudaha wadanka Zambiya.
Dawlada Shiinahu waxay ku hanjabtey inay xiriirka dhanka diblumaasiyada u jari doono Zambiya hadii uu ku guuleystey doorashada Mr Sata.
Michael Sata waxaa ka mid ahaa balanqaadyada uu sameeyey in dadkiisa uu sameyn doono waxbarasho, caafimaad & biyo nadiif ah isagoo xusey inaanu cabi doonin biyaha qasacadaha ama caagadaha ku jira ee nadiifka ilaa iyo inta dadka wadankiisu ay helayaan biyo nadiif ah.
Sata oo ah nin sigaar yacab isnacay ah wuxuu siyaaada ka soo galay dhanka siyaasada isagoo markii dalkiisa uu ku soo noqdey ku biiray ciidamada Booliiska.
Sida ay sheegtey qaramada midoobay shacabka wadanka Zambia oo 13 milyan ah 70% waxay ku nool yihiin saboolnimo waxaana qofka u dhashay wadankaasi mushaar ahaan sanadkii oo dhan uu yahay $ 255 doolar oo kaliya.